Dhageyso: 99 Sanadood oo kasoo wareegtay Geeridii Halgamaa Sayid Max'med Cabdulle Xasan.
8 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay Jubbada Hoose.
Muslimiinta ku nool gobolka Amhara ee dalka Itoobiya oo ka sheeganaya xadgudubyo dhan walba ah.
Monday December 23, 2019 - 11:00:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 5.0/5 Stars) Total Votes: 200
Alle ha unaxariistee halgamaagii mujaahidka ahaa ee Sayid Max'med Cabdulle Xasan iyo Daraawiishtiisi ayaa umadda Soomaaliyeed uga tagay dhaxal aan waligiis go'i doonin kaas oo ah halgan jihaadi ah iyo faafinta diinta Islaamka.
Wax ku dhow Boqol sano ayaa kasoo wareegtay geeridii Mujaahid Sayid Max'med Cabdulle Xasan oo Kifaax Iftiimaya lasoo galay cadowga umadda Soomaaliyeed, Daraawiishtii Sayidka ayaa cadowga lagalay dagaal aan isku dhigmin sidaas oo ay tahay waxay kasoo hooyeen guulo waaweyn.
21,December 1920-kii ayuu Imaam Sayid Max'med Cabdulle Xasan ku geeriyooday deegaanka Iimeey ee hadda katirsan dhulka Soomaaligalbeed oo ah dhul kujira gummeysiga Xabashida Itoobiya.
Taariikhyahanadu waxay sheegaan in dhibaatada ku habsatay Soomaalida laga raacay laba arrin midkooda, midda koowaad ayaa ah Khudlaankii iyo dhagartii ay ku sameeyeen Halgankii Sayidka oo ay ku fiirsadeen dagaalkii gummeystaha, midda labaad ayaa ah gummaadkii uu Max'med Siyaad Barre ugeystay culimadii diiday gaalnimadiisa oo ay ka dhiidhin waayeen.
Dhibka dabada dheeraaday ee Soomaalida haysta ayaa loo sababeeyay cuqabadii laga dhaxlay labadaas arrin, Daraawiishtii Sayidka waxay nabareen sida gummeystaha laysaga yureeyo iyo xummaanta dabadhilifnimada.
Halkan ka degso qaabkii uu Sayidku u geeriyooday ama Hoos ka dhageyso
Max'med Xuseen Rooble oo wajigabax kalasoo kulmay socdaalkiisi Garoowe.